Fikarohana momba ny firaisana Tranom-pitaovan'ny virjina any Virginie Vance Ellen DeGeneres miaraka amin'ny fiainana niainan'i Oprah Winfrey sy Gayle King - Fikarohana momba ny vatana
Fomba fiaina: Hita taratra amin'ny Fanahy fa Ahtun Re ao amin'ny sehatry ny Fikarohana momba ny Reenkarnation Ryerson-Semkiw
Ellen DeGeneres dia nahatsikaritra ahy foana ho olona misaina misimisy kokoa, izay nahatonga ahy hieritreritra fa afaka misokatra amin'ny fikarohana momba ny vatana vaovao izy. Amin'izay fotoana izay, nandritra ny fivoriana niarahana tamin'i Kevin Ryerson, izay nantsoina anarana hoe Ahtun Re, izay naneho ny fahafaha-manao ny fiainana taloha, dia nanontany an'i Ahtun Re noho ny fiainany efa ela niainany.
Ahtun Re dia nitantara fa mpilalao sarimihetsika mangina i Ellen izay nampifandray ilay mpilalao sarimihetsika sy mpamokatra mpamokatra Fatty Arbuckle.
Nandalo ity fampahalalana ity aho tamin'ny mpiara-miasa iray, Ishtar Ishaya, izay nanolo-tena hanao fikarohana ity raharaha ity. Fotoana fohy taorian'izay dia nilaza i Ishtar fa mety ho i Ellen Virginia Vance. Azo antoka fa mpilalao sarimihetsika tamin'ny famokarana Fatty Arbuckle i Virginia Vance My Stars.
Nandritra ny fivoriana nanaraka an'i Kevin, Ahtun Re nanamafy fa i Ellen DeGeneres no vatana vaovao ao Vance.
Ny fiainan'ny lasa ho an'i Ashton Kutcher sy Demi Moore ary ny Ellen DeGeneres Wildlife Fund
Ny mahaliana, amin'ny andro hanoratako ity lahatsoratra ity, dia voalaza fa mpilalao sarimihetsika Ashton Kutcher ary ny mpanentana ara-barotra dia nanome vola 4 tapitrisa dolara Ny Fonon'ny Wildlife Ellen DeGeneres.
Taona vitsy lasa izay, nanao fampisehoana ny porofon'ny fiverenana indray ao amin'ny vatana vaovao ho an'i Ashton Kutcher aho Demi Moore, raha mbola niaraka izy ireo, tao an-tranony tao Beverly Hills. Tamin'ny alàlan'ny asako niaraka tamin'i Kevin Ryerson dia nanandrana naka fiainana taloha ho an'i Ashton sy Demi aho. Ahtun Re dia nilaza tamiko fa mpilalao izy ireo ary mpivady tao amin'ny sehatry ny teatra New York City tamin'ny faran'ny taonjato (1900). Mampalahelo fa tsy nahita ireo mombamomba ny fiainana taloha aho. Raha misy mahalala an'ity vanim-potoana teatra ity dia hankasitrahana ny fanampianao. Afaka mifandray amiko amin'ny: walter@reincarnationresearch.com
Fiainana taloha ho an'i Oprah Winfrey
Oprah Winfrey dia mpifanolo-bodirindrina amin'i Ellen DeGeneres ao amin'ny fokonolona any Montecito, akaikin'i Santa Barbara, Californie. Ny fiainana taloha ho an'i Oprah dia tafiditra ao anatin'ny bokiko, ateraka indray, izay nantsoina hoe Oprah ho teraka indray tamin'ny nahaterahan'i James Wilson, izay nanasonia ny fanambarana ny fahaleovan-tena.
Nampianarin'i Wilson koa ny literatiora anglisy tao amin'ny College of Philadelphia, izay mifanaraka amin'ny fitiavan'i Oprah ny boky sy ny bokiny malaza. I Wilson koa dia lasa iray amin'ireo olona mpanankarena tao amin'ny firenena vaovao tany Etazonia, tahaka an'i Oprah dia niteraka harena be. Nanjary mpisolovava i Wilson, nampianatra lalàna tao amin'ny College of Philadelphia ary voatendry ho any amin'ny Fitsarana Tampon'i Etazonia avy amin'i George Washington.
Fiainana taloha ho an'ny Gayle King
Nahazo fifandraisana akaiky i Oprah Gayle King nanomboka tamin'ny 1976. Gayle dia manana ny asany ho mpampita vaovao mpanangom-baovao sady mpilaza ny fahitalavitra talohan'ny naha-tonian-dahatsoratra azy O, The Oprah Magazine ao amin'ny 1999. Gayle amin'izao fotoana izao dia mpiara-miasa amin'ny CBS ity maraina ity, izay andrasako isan'andro. Tena tiako ny toetran'ny olona malala-tsaina sy malefaka an'i Gayle.
Tao amin'ny fandalinako, nanjary mpifanolo-bodirindrina indrindra i Oprah sy Gayle satria izy ireo no mpivady nandritra ny Revolisiona Amerikana. Tamin'ny alàlan'ny asako miaraka amin'i Kevin Ryerson, Gayle dia fantatra amin'ny anarana hoe vadin'i James Wilson, izay ny anarany vavy Hannah Grey. Tahaka an'i Gayle King, i Hannah dia niasa toy ny mpanao gazety nanoratra boky, Vehivavy Mendri-pitokisana kokoa: Novelin'ny Fitsarana Tampony teo aloha.
Raha namaky an'i Hannah ity boky ity i Gayle, dia mety hahaliana raha hahita ny faharetan'ny hevitra na ny fanoratana izy. Tamin'ny tranga vao teraka tamin'ny taonjato voalohan'i John B. Gordon | Jeffrey Keene, fanadihadiana ny taratasin'i Gordon sy Keene nosoratan'ny mpampianatra mpampianatra iray ao amin'ny Oniversiten'i Kalifornia, dia naneho fomba fanao mahazatra i Berkeley. Mba hahafantarana bebe kokoa, azafady mankany:
Trangam-panjakan'izao tontolo izao an'i John B. Gordon | Jeffrey Keene
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana eo amin'ny sehatry ny tarehy eo amin'ny sehatry ny fanambadiana ao amin'ny vatana, mifandraika amin'i Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey sy Gayle King. Kitiho ireo sary mba hampivoatra azy ireo mba handinihina tsara kokoa ireo endriny.
Ny fiainana taloha talenta: Virjiny mpilalao horonantsary i Virginia Vance ary nanana ny fahitalavitra manokana i Ellen DeGeneres-famelabelaran-kevitra momba ny serasera Ellen. Ny fifandraisan'i James Wilson | Oprah Winfrey sy Hannah Grey | Gayle King dia nofaritana etsy ambony.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Niverina indray i James Wilson sy Hannah Grey Wilson tao amin'ny vehivavy tsara indrindra an'i Oprah Winfrey sy Gayle King.
Fiovan'ny lahy sy vavy amin'ny alalan'ny fanambadiana: James Wilson dia lehilahy, izay nanjary niova fo ho Oprah, vehivavy iray.
Fiovan'ny Hazakazaka: James Wilson sy Hannah Grey Wilson dia Caucasian, while Oprah Winfrey sy Gayle King dia African-American. Ny fikarohana momba ny firaisana amin'ny zaridaina, anisan'izany ireo tranga navoakan'i Ian Stevenson, MD avy ao amin'ny University of Virginia, dia mampiseho fa ny fanahy dia afaka manova fivavahana, zom-pirenena, foko ary hazakazaka mandritra ny androm-piainany. Io fandinihana sy fahatakarana io dia afaka manampy amin'ny fampiroboroboana an'ity tontolo ity ho toerana milamina kokoa, satria ny ankamaroan'ny ady sy ny fifandirana dia mifototra amin'ny fahasamihafana eo amin'ireo marika ara-kolotsaina momba ny maha-izy azy.